ဟိုက်ဒြောက်ဆီ ကလိုရိုကွင်းကြောင့် သေဆုံးမှုပိုများနိုင်
ဟိုက်ဒြောက်ဆီ ကလိုရိုကွင်းကြောင့် သေဆုံးမှုပိုများ...
23 พ.ค. 2563 - 22:44 น.
ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်း အာနိသင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားခဲ့
သမ္မတထရမ့်က ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ဖို့ အတွက် သူသောက်နေတယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်းဟာ ရောဂါရှိတဲ့လူနာတွေ အတွက် သေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို ပိုတောင်တိုးစေတယ်လို့ လန်းဆက်ဆေးပညာဂျာနယ်က တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကိုဗစ်လူနာတွေကို ငှက်ဖျားဆေးဖြစ်တဲ့ ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်းနဲ့ကုလို့ ဘာအကျိုးမှ မရှိနိုင်ဘူးလို့ အဲဒီသုတေသနကဆိုပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေကနှလုံးထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ သတိပေးတဲ့ကြားက သမ္မတထရမ့်ဟာ ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်း သောက်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်ဟာ ဒီဆေးကို ကျန်းမာရေး ပညာရှင်တွေရဲ့ သတိပေးချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး အကြိမ်ကြိမ် ထောက်ခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်းဟာ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ အရေပြားလေးဖက်နာ၊ အဆစ်အမြစ်လေးဖက်နာရောဂါတွေအတွက် အသုံးပြုရင် ဘေးကင်းပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အတွက်ကိုတော့ ဘယ်ဆေးသုတေသနကမှ ထောက်ခံချက်ပေးထားတာ မရှိဘူးလို့ လန်းဆက်ဆေးပညာဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။
လန်းဆက်ဂျာနယ်ကလုပ်တဲ့ ဆေးသုတေသနမှာတော့ ကိုရိုနာလူနာ ၉၆၀၀၀ ကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလူနာတွေထဲက ၁၅၀၀၀ ကို ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်း၊ သို့မဟုတ် ကလိုရိုကွင်းကို သူတမျိုးတည်း ဒါမှမဟုတ် ပဋိဇီဝဆေးတမျိုးမျိုးနဲ့အတူ တိုက်ပြီး စမ်းသပ်ကုသခဲ့ပါတယ်။
ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်းကို သူကိုယ်တိုင် သုံးစွဲနေတယ်လို့ သမ္မတထရမ့်ပြောဆို
အဲဒီဆေးတွေတိုက်ခဲ့တဲ့ လူနာတွေဟာ အသက်ဆုံးရှုံးခြေများပါတယ်။ တခြားလူနာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် နှလုံးခုန်နှုန်းမမှန်တာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့သုတေသနပြုလေ့လာချက်က ဆိုပါတယ်။
သေဆုံးမှုနှုန်းကို ကြည့်ရင် ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်း သောက်သူက ၁၈ ရာနှုန်း၊ ကလိုရိုကွင်းသောက်သူက ၁၆.၄ ရာနှုန်းရှိပြီး၊ အဲဒီဆေးတွေ မသောက်သူအုပ်စုမှာတော့ ၉ ရာနှုန်းသာရှိပါတယ်။ ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်း သို့မဟုတ် ကလိုရိုကွင်းကို ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ တွဲဖက်တိုက်ကျွေးတဲ့ အုပ်စုမှာ သေဆုံးမှုဟာ သုတေသနတွေ လုပ်မကြည့်ရသေးဘဲ မသုံးသင့်ဘူးလို့ သုတေသီတွေက ဆိုကြပါတယ်။
သမ္မတထရမ့်ကသူ့မှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး စမ်းသပ်မတွေ့ရှိခဲ့ပေမယ့် ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်းဟာ အကျိုးရှိစေလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လို့ သောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
WHO ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေ ဆုံးဖြတ်
ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်းဟာ ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ရှိမရှိ စမ်းသပ်မှုတခုကတော့ လုပ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစမ်းသပ်မှုမှာတော့ ကိုဗစ်လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ရတဲ့ ဥရောပ၊ အာဖရိက၊ အာရှ၊ တောင်အမေရိကတို့ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း ၄၀၀၀၀ ကျော်ကို ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်း တိုက်ကျွေးကြည့်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလန်းဆက်ဆေးပညာဂျာနယ်ရဲ့ တွေ့ရှိချက်အပေါ်ဘယ်လို သဘောထားပါသလဲလို့ အိမ်ဖြူတော်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ရဲ့ ပူးပေါင်းဆက်သွယ်ရေး အရာရှိ ဒေါက်တာဒက်ဘရာဘာ့ခ်စ်ကို မေးရာမှာတော့ အမေရိကန်စားသောက်ကုန်နဲ့ ဆေးဝါးထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့က ဟိုက်ဒြောက်ဆီကလိုရိုကွင်း အသုံးပြုမှုကို ကာကွယ်မှုအတွက် ဖြစ်စေ ကုသမှုအတွက်ဖြစ်စေ အသုံးပြုတဲ့ အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောထားပြီးသားပါလို့ ဆိုပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ဟိုက်ဒြောက်ဆီ ကလိုရိုကွင်းကြောင့် သေဆုံးမှုပိုများနိုင်